Ngwa 10 dị mkpa iji nweta ọtụtụ n'ime Chromecast | Gam akporosis
10 nke ngwa kachasị mma ị nwere ike iji na Chromecast gị
Chromecast abụrụla otu n'ime ngwa ahịa kachasị aga nke ọma na Google ọ na-ejikwa dongle a dọta mmasị ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa iji gbasaa ọdịnaya ị nwere na ekwentị gị gaa na ihuenyo ime ụlọ gị. Nwere ike soro ndị enyi gị gwuo egwuregwu, sọọ mpi ịgba egwu, ma ọ bụ weta foto ndị ị mere ezumike.
Ngwaọrụ enwere ike iji karịa ma ọ bụrụ na anyị nwere 10 ngwa ngwa pụrụ iche maka dị ka ha dị na ndepụta a. N'etiti ikpo ngwa ahụ ị nwere ike iwunye, ahọrọ m iri ndị a na-enye ihe kpatara ya na njirimara dị iche iche ka Chromecast nwee uru karịa karịa ka ọ nwere.
1 mega nkedo
3 Castlọ Nche maka ngwa Chromecast
4 Plex maka gam akporo
5 Ntugharị Google
8 Aghụghọ Titans
10 Egwú Google Play
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na mmeputakwa nke ụfọdụ faịlụ multimedia ị nwere na Chromecast gị, MegaCast ga-abụ ezigbo onye enyemaka gị. MegaCast ga-enye gị ohere igwu ụdị faịlụ multimedia niile site na ekwentị gị na Chromecast gị.
Ọ bụ otu n'ime ngwa dị mkpa maka Chromecast. A ngwá ọrụ ime foto gụgharia, gee egwu gị ma ọ bụ kpọọ vidiyo gị. Ọ na-enye gị ohere ịnweta faịlụ gị na mpaghara yana ndị ị nwere na netwọkụ ị jikọtara. The free version nke AllCast na-ejedebeghị na atụmatụ.
Castlọ Nche maka ngwa Chromecast
Ngwa nke na agwa gi ihe niile ngwa na-akwado ya na Chromecast. Select họrọ otu na ọ na-eduga gị na Playlọ Ahịa Google, na-enweghị nchegbu gbasara ihe ọ bụla, ebe ọ naghị anabata ngwa ahụ n'onwe ha, kama ha bụ ụzọ mkpirisi.
Ụlọ ahịa ihe nkedo maka ngwa Chromecast
Plex maka gam akporo
Ihe ọzọ dị mkpa iji jee ozi dị ka sava mgbasa ozi n'ụlọ gị na-enye ohere nkwanye gị Chromecast. Egwu, foto, na vidiyo na-adị mfe ịkekọrịta ka ị mekọrịta ọrụ nchekwa igwe ojii gị maka nkwado ndabere. Freedị nweere onwe ya na-enye ohere igwu egwu otu nkeji site na ihe nkesa gị, mana ịnwere ike ịse foto na vidiyo site na ekwentị gam akporo gị ka ịchọrọ.
Plex: ihe nkiri, TV, egwu
Developer: Ụlọ ọrụ Plex, Inc.
Dị mkpa maka onye ọ bụla nwere Chromecast. Na-eje ozi maka nzube niile na ọ-enye gị ohere inyocha onwe gị faịlụ, multimedia ọdịnaya na Netflix na YouTube, nakwa dị ka ngwa ọdịnala dị ka Google Play Music. Kpamkpam free na nnọọ mfe iji.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso ndị enyi gị kporie ndụ gosi nka gị na ịgba egwu, Gbalịa Just Dance Now. Na-edobe ekwentị n'otu aka mgbe ị na-agba egwu n'otu egwu ya. Ọkacha ka i imitateomiri agba egwu nlereanya na ihuenyo, akara gị ka mma.
Ọ bụ n'ụzọ zuru oke na ngwa ahụ na-eitomi Pictionary, egwuregwu mbadamba nke ị na-eji na-ese ihe iji mee ka ndị ọzọ maa ihe ịchọrọ igosipụta. Nwere ike ise na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nke mere na ọ na-aga ozugbo na ihuenyo site Chromecast. Ngwa a bụ n'efu, yabụ na-eche ọ funụ.
Egwuregwu efu na a akwa visual imewe ma na-egwu egwuregwu. Turn dabeere, chọrọ ụfọdụ atụmatụ. Will ga-ahọrọ n'etiti ịwakpo, ịgbachitere ma ọ bụ iwusi onwe gị ike ka ị nwee ike ịga nke ọma megide ndị iro ga-abata.
Soro na nkata ahụ site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị mgbe ị na-ekiri HD iyi na TV gị. Ihe ikpo okwu nke nwere asọmpi kachasị mkpa na mbara ala na ebe achọtara kpakpando na-enwu gbaa. A gha inwe maka ndi egwuregwu na ihe ndi ozo n’ime Chromecast.
Twitch: Spiele na-ebi ndụ
El egwu egwu ọtụtụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ maka atụmatụ kwa ọnwa. Maka n'efu, ịnwere ike bulite egwu gị na Google Play Music iji kpọọ ya na Chromecast site na ngwa a. Jikọọ ndị na-ekwu okwu gị na ị ga-enwe ebe ntụrụndụ pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » 10 nke ngwa kachasị mma ị nwere ike iji na Chromecast gị
5 Minecraft-dị ka egwuregwu vidiyo maka ịlanarị na ndị hụrụ ụlọ n'anya
Ihe kachasị mma maka ihe nkwụnye gam akporo gị ka a na-akpọ CM Swipe. IHE !!